Imprint | safidy
Raha efa tonga teto ianao, dia toa mahaliana anao izay ao ambadiky ny Safidy: Amin'ny maha-mpanao gazety efa ela ahy, dia nanontany ny tenako ho an'ny tenako aho, izay mety hahitana ny heviny amin'ny resaka fanaovan-gazety. Ny valiny azoko dia hitanao ato: Option. Maneho fifandimbiasana amin'ny fomba mirindra - ho an'ny fivoaran'ny fiaraha-monina. Tamin'ny Aprily 2014, ny safidy Printmagazine (sy Option Online) dia niseho voalohany, ary mbola misy ankehitriny - na eo aza ny fanamby rehetra. Tamin'ny volana Mey dia nanangana Option ho Social Network any Aotrisy ny 2018, nanomboka ny volana septambra 2019 maneran-tany.
Ny ao ambadiky ny Option dia tsy orinasa lehibe, fa mpamoaka vaovao sy olona tena manana ny laoniny izay nahafantatra zavatra tokana: Miaina ao anatin'ny vanimpotoana lehibe indrindra isika ary noho izany dia mampientam-po indrindra amin'ny maha-olombelona. Ho taranatsika io ary hamolavola ireo taonjato manaraka. Raha tsy misy antsika dia mety tsy ho avy hoavy (mendrika hiaina). Ary tsy midika izany fa tsy ny ekolojia fotsiny, fa ny fanamafisana, automation, autokrasia ary sakana maro hafa amin'izao androntsika izao. Izany rehetra izany amin'ny fotoana iray: Ankehitriny!
Ny idealy tena koa dia mbola haratsina matetika. Hitako tsara ny maha-idealisma ahy raha ny hevitr'io teny io: ny fikatsahana ireo idealy, tontolo tsara sy fiaraha-monina tsaratsara kokoa. Azonao atao ny miresaka momba ny làlana mandrakizay, ny tanjona dia mampifandray antsika rehetra: fandriampahalemana, fanambinana, fahamarinana, ... ho an'ny rehetra. Iza no mieritreritra fa tsy ho vita, mety hametraka ny lohany amin'ny fasika, hitako hafa amin'ny azy. Ary izay no antony mahatonga ny safidy.
Option dia sehatra iray manatsara sy mahaleo tena tanteraka. Ny safidy dia manambara ny fifandimbiasana amin'ny sehatra rehetra ary manohana ny fanavaozana sy hevitra manandrana - mampiavaka-mitsikera, manantena, miorina amin'ny zava-misy, ary tsy misy firehana politika. Ny safidy dia natokana irery amin'ny vaovao mifandraika ary mirakitra ny fandrosoana lehibe misy ao amin'ny fiarahamonintsika.
Ny safidy dia nipoitra avy amin'ny fandraisana an-tanana manokana, tamim-pankasitrahana ireo mpiara-miasa sy mpanjono mitovy hevitra, ary tsy mbola notohanan'ny famatsiam-bolam-panjakana na vola hafa. Rehefa mifidy mpiara-miombona antoka amintsika, dia mijanona ho mahatoky tsy mivadika isika. Option Print dia natao pirinty any Aotrisy araka izay azo atao amin'ny tontolo iainana miaraka amin'ny loko voajanahary. Ny kolejy dia karama andoavana ny sarany, mihoatra ny fifanarahana iombonana.
Tena ho faly aho raha tonga amin'ny option. Satria resy lahatra aho fa manana safidy foana isika!
Vaovao misimisy kokoa eto.
Helmut Melzer, Mpanorina & Mpanonta
Option dia mpikambana amin'ny:
Tranonkala ofisialy: option.news
Raha ny antontan'isa misy anay amin'izao fotoana izao dia azafady mba hifandraisa aminay any amin'ny birao [AT] dieoption.at
tompony: Option Media eU, Helmut Melzer, FN412277s, ATU61228246
Mpanorina, Tale Mpitantana & Tonia-mpamindra ambony, sns .: Helmut Melzer
Fanohanana ny mpikambana: s.huber (AT) dieoption.at
Mpanoratra: redaktion (AT) dieoption.at